I-Ultrasonics yokukhiqiza yokwengeza - iHielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "I-Ultrasonics yokukhiqiza okwengeza"
Izithako zokudla noma zokudla okunempilo ziyimikhiqizo esisiza ukuhlinzeka ngezakhi zomzimba ukuze zilinganisele ukungenela kwezakhi ekudleni okujwayelekile. Izithako zokudla ezijwayelekile zifaka amavithamini, amaminerali, amaprotheni, ama-amino acid, ama-antioxidants, amakhambi noma ezinye izinto ezinempilo.
Kukhona izicelo ezimbili ezinkulu ze-processors ze-ultrasonic ekukhiqizeni kokungezelelwa kokudla:
ukukhipha noma ukwakheka kwezakhi zomzimba, kanye
ukwakhiwa komkhiqizo wokuqinisa wokugcina.
Isizinda se-Ultrasonic se-Nutrients
Esikhathini sokuqala, izakhamzimba zesengezo kumele zilungiselelwe. Lokhu kungenzeka noma ngokukhipha isakhi kumkhiqizo wemvelo, isib. Isitshalo, noma ngokuhlanganisa ikhemikhali ngamakhemikhali.
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyindlela enamandla, ephula izindonga zeseli futhi ikhiphe nezinto ezihlanganisiwe ze-bioactive. Izinzuzo eziphambili zokukhishwa kwe-ultrasonic isilinganiso saso esikhulu kakhulu sokukhipha, isivinini sokukhipha ngokushesha, ukusetshenziswa kwe-sol sol eluhlaza (isib. Amanzi, i-ethanol, uwoyela wemifino njll.), Ukuphepha, kanye nobungani. Ukuba yindlela yokukhipha engeyona eyokushushuba, isizinda se-ultrasonic sivimbela ukonakaliswa okushisa komzimba kwezinto ezithinta ukushisa futhi kuholele ikhwalithi ephezulu ekhishwa. Izinto ezikhishwe ngokujwayelekile ezikhiqizwe yi-sonication zifaka i-curcumin, i-algae lipid, ama-antioxidants, ama-cannabinoids (i-CBD, i-THC, i-CBG, i-terpenes njll.), Amavithamini kanye nama-flavonoids.
Ngokwendalo, ukuqina kwe-sonochemical of reactionings kungasheshisa isilinganiso sokuguqulwa futhi kukhuphule izivuno. Ukulungiswa kwe-Sonochemical kwama-amino acid kuzixazululo ezinamanzi kuyisibonelo esihle, lapho ama-ultrasonicators asetshenziswa ngempumelelo ekukhiqizeni izakhi zomzimba.
Ultrasonic Supplement Ukwenziwa
I-Ultrasonic iyindlela enamandla yokuxuba, yokusabalalisa nokusabalalisa. Ukwakha izithasiselo zokudla, izithako zangempela kumele zisetshenzwe njengefomu le-bioava ekhona, isib. Abaxube be-Ultrasonic basiza ukusabalalisa izithako ezisebenzayo ngokufana ekwakhiweni, okuthi kamuva kusetshenzwe kumaphilisi, amaphilisi, amakhebuli, amathebhu we-gel, ama-extracts, noma uketshezi. Izithako eziningi ze-bioactive ezinjenge-curcumin, i-cannabidiol noma i-resveratrol aziyona i-soluble yamanzi futhi zibonisa i-bioavailability ephansi yemvelo. Ukwakheka kweLiposomal, lapho isakhi esisebenzayo sifakelwe ku-bilayer yama-phospholipids, kwandisa ukubekeka kwe-bioavailability kwezakhi ezinjalo. Ama-processor we-Ultrasonic ayindlela ethandwa kakhulu yokwakha izakhi zomzimba kuma-liposomes aqinile, anano-nano, kufaka phakathi i-liposomal Vitamin C, i-CBD, noma i-resveratrol ukusho nje okumbalwa.
Ukuhlanganiswa kwe-Ultrasonic nokuhlakazeka nakho kusetshenziselwa ukwenza ukwakheka njengokumiswa okukhishwa nosayizi nano-emano, ama-nano-emulsions, ama-emulsions wokukhetha kanye nama-gels.
Ama-processor we-Ultrasonic asungulwe kahle embonini yokudla ne-pharma. I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngamadivayisi we-high-ukusebenza we-high kusuka kwelebhu nosayizi ebhentshini phezulu aze afike ezikalini ezigcwele zezentengiso ezinekhono lokucubungula amathani amaningana ngehora.
Funda kabanzi mayelana nokuthi amaprosesa we-ultrasonic angathuthukisa kanjani ukwenziwa kwezithasiselo ezinempilo.